Dowlada Oo Shaacisay Joojinta Mashaariicda Dalxiiska Ee La Digue
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dowlada Oo Shaacisay Joojinta Mashaariicda Dalxiiska Ee La Digue
Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Joojinta gabi ahaanba mashruucyada horumarsiinta hoyga dalxiiska ayaa dhaqan gali doona laga bilaabo bisha Ogos 1, 2021, ilaa iyo sanadka 2023 maadaama sida ugu dhaqsiyaha badan looga baahan yahay wax ka qabashada La Digue horumarin saaid ah iyo in la ilaaliyo qaab nololeedkeeda.
Natiijooyinka Daraasaadka Qaadista Awoodda ee La Digue ee lagu sameeyay 2019-21 ayaa maanta lagu dhawaaqay.
Daraasadda ayaa loo igmaday inay dejiso heerka horumarka ee jasiiradda maanta.
Waxay sidoo kale bixisaa talooyin si loogu hago dowladda dejinta siyaasadaha lagu maareeyo kobaca dalxiiska loona gaaro horumar dalxiis oo waara Jasiiradda yar.
Waaxda Dalxiiska ayaa ku dhawaaqday Isniintii, 26-kii Luulyo, kulan ay qabteen saraakiisha sare ee Waaxda oo ay la yeesheen daneeyayaasha arrimaha La Digue si ay ugu soo bandhigaan natiijooyinka Daraasad Qaadista Awood u leh La Digue oo lagu qabtay 2019-21.
Daraasadan, oo ay samaysay shirkad madaxbanaan oo la talin, Sustainable Travel International, ayaa loo igmaday inay dejiso heerka horumarka ee jasiiraddan sidoo kale inay bixiso talooyin lagu hago dawlada xagga siyaasadaha horumarinta si loo maareeyo kobaca dalxiiska loona gaadho horumar dalxiis oo waara Jasiiradda yar.
La Digue, mid ka mid ah sawirada ugu jasiiradaha Seychelles iyada oo qaab nololeedkeeda dib u dhigis ah, geedo dhagax adag leh iyo mid ka mid ah xeebaha ugu sawirada badan adduunka, ayaa lagu soo dhoweeyay 2019, 17,868 oo soo booqday habeenki qaar ka mid ah 658 xarumood oo hoyga laga heli karo jasiiradda.
Natiijooyinka ayaa lagu go'aamiyey in loo baahan yahay waaxda inay dib u eegis ku sameyso mashaariicda horumarineed ee jasiiradda, Mrs. Bernice Senaratne, Agaasimaha Siyaasadda, Cilmi-baarista, Kormeerka iyo Qiimeynta ee Waaxda Dalxiiska, ayaa kulanka ku tiri, oo laga soo qabtay Waaxda Xarunta ee Botanical House oo ay goobjoog ka ahaayeen Wasiirka Arimaha Dibada iyo Dalxiiska, Mr Sylvestre Radegonde, Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Mrs. Sherin Francis iyo Sinha Levkovic Agaasimaha Waxsoosaarka Isniinta.
Inta layligan lagu guda jiro, laga bilaabo Ogosto 1, waxaa jiri doona gebi ahaanba joogsad dhan mashaariicda hoyga dalxiiska jasiiradda ilaa 2023 sida tallaabada degdegga ah looga baahan yahay ilaalinta jasiiradda ama ilaa soo-booqdeyaasha ka imanaya iyo degitaankiisa, sicirrada ay ka soo kabanayaan. Joojintaani waxay ka dhacaysaa macnaha guud ee horumarinta kaabayaasha wax soo saarka lagama maarmaanka u ah sida biyaha, korontada iyo bulaacada oo dabooli doonta kobaca warshadaha.
Baahida loo qabo in la dejiyo qorshe soo kabasho si loo go'aamiyo wadada soo kabashada iyadoo la tixgelinayo saameynta dalxiis ee jasiiradda iyo dhaqaalaha qaranka, iyo ganacsiyada iyo dadka degganba, waa mid muhiim ah, daraasadda ayaa muujisay
Talooyinka muhiimka ah ee 2019-2020 Qaadista Daraasadda Awoodda ee La Digue waxaa ka mid ah: